पोखरामा खानेपानीमा पनि सिण्डिकेट ,एउटै जारमा दुइ थरी तौल | My News Nepal
यदुनाथ बन्जरा/कास्की । पोखराका पानी उद्योगले एक वोतल पानी १३ रुपैयामा पसलेलाई वेच्छ । त्यहि पानी पसलेले २५ रुपैयामा ग्राहकलाई वेच्छ । वोतलमै अधिकतम खुद्रा मुल्य (M.R.P.) रु. २५ प्रिन्ट गरिएको छ । पसलेले ढुक्कसँग झण्डै सत प्रतिशत नाफा लिएर ग्राहकलाई पानी बेचिरहेको छ ।
यस्तै जारको पानीमा पनि मनोमानी मुल्य राखिएको छ । राजधानी काठमाडौंमा ४० रुपैयामा पाउने जारको पानी पोखरामा ७० रुपैया तिर्नु पर्छ । केहि महिना अगाडि सम्म ५० रुपैया प्रति जारमा पाइने पानीको मुल्य एकै पटक २० रुपैया वढाइएको हो । सामान्यतया: कुनै पनि उपयोग्य उत्पादनको मुल्य तोक्ने अधिकार उत्पादकको हुन्छ । वजारको प्रतिस्पर्धा र क्रेता विक्रेताको रोजाइका आधारमा वस्तुको मुल्य वजारले निर्धारण गर्छ भन्ने सर्वव्यापी सिद्धान्त रहि आएको पाइन्छ ।
तर, नेपालमा भने उत्पादकहरुले मिलेमतो गरि (कार्टेलिङ) वस्तु र सेवाको मुल्य तोक्ने गरेका छन् । यसरी कार्टेलिङ गरि मुल्य तोकिने प्रणाली नै व्यवसायीले स्थापित गरिसकेका छन् । खुल्ला वजार निति भनिए पनि प्रतिस्पर्धात्क पद्धतिवाट मुल्य तोक्न नपाउने गरि उद्योगी व्यापारीले उपभोक्ताको ढाडै सेक्ने गरि मुल्य तोकेर वजारलाई नियन्त्रणमा लिदै आएका छन् ।
त्यति मात्र हैन जारको पानी विर्कोमा समेत वोटल वाटर एसोसिएसनको स्टिकर लगाउने गरिएको छ ।
विर्कोको स्टिकर विक्री गर्न नेकासिल विक्री र दोव्वर मुल्य उपभोक्ता सँग उठाउन पानी व्यवासयीहरुको सिण्डिकेटे काम गरेको छ । राज्यद्धारा जारी कानुनलाई धोती लगएर पानी उद्योगी र व्यापारीहरुले मनोमानी रकम उठाएर करोडौ कमाएका छन् । झण्डै सत प्रतिशत नाफा खाने कालावजारीलाई किन कारवाही हुदैन ? कहिले हुन्छ पानीको मुल्यमा समायोजन ? नियमनकारी निकायले पानी उत्पादक र विक्रेताहरुको सिण्डिकेट तत्काल तोड्न जरुरी रहेको छ । एम.आर.पि. घटाएर पानी विक्री गर्ने सप्लायर्स र पसलेहरुलाई एसोसियसनले तीन हजार सम्म जरिवाना तिराउने गरेको खवर सार्वजनिक भइसकेको छ ।